Hogaamiyaha xisbiga Bidixda: Dhacdo tiiraanyo leh ayay ahayd - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ann-Margarethe Livh oo uu dhaawac ka soo gaaray weerar Muqdisho loogu geeystay
Hogaamiyaha xisbiga Bidixda: Dhacdo tiiraanyo leh ayay ahayd
La daabacay torsdag 22 augusti 2013 kl 11.19
Hogaamiyaha xisbiga Bidixda, Jonas Sjösted ayaa shaleyto tacsi ka diray mar uu warramaayay idaacadda la iska daawado ee SVT, sheegayna inuu aad iyo aad uga tiiraanyeeysan yahay geeridii Cabdiraxiin Xasan oo shaleyto lagu diley magaalada Muqdisho.
"Waa dhacdo murugo leh. Waxay maalin madow u tahay xisbiga Bidixda. Cabdi wuxuu ahaa wiil da'yar oo ku dhaqnaa magaalada Istockholm oo booqasho ku tagay Soomaaliya si uu uga qeyb qaato mashruuc uu xisbiga bidixdu waday ee caalami ah. Waxaan la murugooneynaa saaxiibbadiis iyo qaraabadiis. Cabdi wuxuu boos ballaaran ka banneeyay laanta dhallin-yarada ee xisbiga "Ung Vänster, sida uu sheegay Jonas Sjösted, hogaamiyaha xisbiga Bidixda.
Galab-nimadii shalayto oo weerar lagu qaaday gaari ey saarnaayeen afar ruux eyna ka mid ahaayeen Cabdiraxiin Xasan oo 24-jir ah iyo Anna-Margarethe Livh oo labaduba ka baqooleen magaalada Istockholm ayuu ku geeriyooday Cabdiraxiin Xasan iyo nin soomaali ah ee waardiyeeynayay iyada oo dhanka kale uu dhaawac ka soo gaaray Ann-Margarethe Livh xabadka iyo gacanta oo fiid-nimadii loo duuliyey magaalada Nayroobi si halkaasi loogu siiyo dar-yeel caafimaad.
Ann-Margarethe Livh, oo ka tirsan xisbiga Bidixda, ahna hogaamiyaha xisbiga laantiisa xiriirka caalamiga ayaa booqasho ku tagtay magaalada Muqdisho saddex maalmood hortood iyada oo ey weheliyaan dhallin-yaro ka baqooshay xaafadaha Rinkeby iyo Husby, kolkii weerar lala beegsaday gaari ey saarnayeen, isla-markaana si aan kala go' lahayn xabbado loogu furey. Ann-Margarethe Livh, ayaa sheegtay inay hubaal tahay in weerarkaasi iyaga lagu beegsadey: